कालो र कालो छालाको लागि घर होम आइपीएल कटाई हटाउने (भाग) -इन्डस्ट्री न्यूज-शेन्ज़ेन नो स्मार्ट स्मार्ट निर्माण टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड
गाढा र कालो छालाको लागि उत्तम घर आईपीएल कपाल हटाउने (भाग)
समय: 2019-12-27 हिट्स: 3
कालो र कालो छाला टोनका लागि सुरक्षित घर लेजर / आईपीएल कपाल हटाउनको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन, छनौट गर्न शीर्ष उपकरणहरू
यदि तपाईसँग कालो छाला छ भने सबै घरका आईपीएल र लेजर मेशिनहरू तपाईका लागि सुरक्षित हुँदैनन्। त्यो किनभने लेजर र आईपीएल कपाल हटाउने पछाडि विज्ञानको कारण हो।
यस राउन्ड-अपमा, किन सबै उपकरणहरू सुरक्षित छैनन्, अरू किन छन्, आफ्नो छालाको टोन कसरी जाँच गर्ने, र कुन उपकरणहरू कालो र कालो छाला टोनमा सुरक्षित र प्रभावकारी छन् जान्नुहोस्। तपाईंको छाला टोनको लागि उत्तम उपकरण फेला पार्नको लागि पढ्ने जारी राख्नुहोस्।
यी कालो र कालो छाला घरको लागि सुरक्षित आईपीएल मेशिनहरू यूके, युरोप, अष्ट्रेलिया र उत्तर अमेरिकामा व्यापक रूपमा उपलब्ध छन्।
सर्वप्रथम, गहिराइमा हामी सबै लेजर मेशिनहरू कालो र कालो छालाको लागि सुरक्षित नभएको गहिराइमा खोजी गरौं।
किन सबै लेजर र ipl उपकरणहरू कालो छालाको लागि सुरक्षित छैनन्?
यो लेजर र आईपीएल कपाल हटाउने पछाडि विज्ञानमा तल छ।
हाम्रो शरीरमा पदार्थहरु विभिन्न तरंगदैर्ध्यमा प्रकाश अवशोषित गर्दछन्। हामी यी पदार्थहरूलाई क्रोमोफोर भन्छौं। तिनीहरू केश र छालाको कालो रment्ग हुन् (मेलानिन भनिन्छ), रगतमा अक्सीहाइमोग्लोबिन, र पानी। लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन को लागी लक्ष्य क्रोमोफोर तपाईको कपाल मा melanin हो।
आईपीएल र लेजरबाट शक्तिशाली प्रकाश उर्जाले तपाईंको कपालमा मेलानिनलाई लक्ष्य गर्दछ।
तपाईको कपालका केही कोषहरू (छाला मुनिको बिट) मेलानिन हुन्छन्। यो मेलानिनले आईपीएलको चमक र लेजर उर्जाको दालहरू ग्रहण गर्दछ र तातोमा रूपान्तरण गर्दछ। यसले कपालको फोलिकल क्षेत्रको क्षति गर्दछ। त्यसपछि कपाल बन्द हुन्छ र विश्राम चरणमा प्रवेश गर्दछ। त्यसो भए तपाईको कपाल बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ र अन्ततः बढ्न रोकिन्छ।
छालामा पनि मेलेनिन छ
गाढा छाला टोनमा मेलानिनको सघनता बढी हुन्छ।
हाम्रो छालामा मेलेनिन पनि हुन्छ। प्रकाश र मध्यम टोनमा, त्यहाँ केवल थोरै मात्रामा मेलेनिन छ। यसको मतलब त्यहाँ धेरै मेलानिनको साथ प्रकाश छाला र गाढा कपाल बीच ठूलो भिन्नता छ। हल्का उर्जाले सजिलै तपाइँको कपालमा मेलानिनलाई लक्षित गर्दछ र तपाइँको छालालाई छोड्छ। त्यसकारण लेजर र आईपीएलले हल्का छाला टोन र गाढा कपालमा उत्तम काम गर्दछ।
जे होस्, त्यहाँ गाढा छालामा केन्द्रित मेलेनिन छ। त्यसकारण, तपाईंको छाला र कपालको बीचमा केवल सानो भिन्नता छ। यसको मतलब उपयुक्त टेक्नोलोजी र कन्फिगरेसन बिना नै तपाईको छालाले पनि प्रकाश उर्जा ग्रहण गर्दछ। यसले तातोमा रूपान्तरण गर्दछ र पीडा, छाला र जलेको कारण गर्दछ। तपाईंको छाला अँध्यारो वा हल्का रंगमा पनि गर्न सक्दछ। यो साइड इफेक्ट या त अस्थायी वा स्थायी हो।
त्यसोभए, तपाइँको छालाको टोन सुरक्षित छ भनेर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ?
सबै घर-प्रयोग उपकरणहरू स्पष्ट, सुरक्षित छाला टोन रेंजको साथ आउँदछ प्याकेजि on र प्रयोगकर्ता पुस्तिकामा नोट गरियो। र अधिक ब्रान्डले फिट्जपाट्रिक छाला टोन चार्ट प्रयोग गर्नका लागि।
तपाईसँग कस्तो छाला टोन प्रकार छ?
थॉमस बी। फिट्जपाट्रिकले १ 1975 XNUMX मा फिट्जपाट्रिक स्केलको विकास गर्‍यो। यो अल्ट्राभायोलेट (यूवी) प्रकाशमा बिभिन्न छालाको किसिमको प्रतिक्रिया हुन्छ भनेर अनुमान गर्न प्रयोग गरिन्छ। पूर्ण स्केल विवरण छाला टोन, कपालको र सूर्यमा छाला प्रतिक्रिया। तर घर लेजर र आईपीएल उपकरणहरूको लागि, हामी छालाको रंग स्केल मात्र प्रयोग गर्छौं। कुन टोनले सुरक्षित रूपमा मेसिन प्रयोग गर्न सक्छ यसले स्पष्ट गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ F फिट्ज़ट्रिक प्रकारहरू छन्, जुन प्रकार I देखि VI मा मापन गरिएको छ। प्रकार I लाई सबैभन्दा हल्का छाला र टाइप छैठो अन्धकार छ।
म: हल्का, फिक्का सेतो छाला
दोस्रो: सेतो, निष्पक्ष छाला
III: मध्यम सेतो देखि जैतुन छाला
IV: जैतुन, मध्य-खैरो छाला
V: खैरो, गाढा खैरो छाला
VI: धेरै गाढा खैरो देखि कालो छाला
कुन प्रकारको तपाईको नजिक तपाई हुनुहुन्छ भनेर हेर्न स्केल प्रयोग गर्नुहोस्। शरीरको फरक क्षेत्रहरू जाँच गर्नुहोस् किनभने तपाईंको स्वर फरक हुन सक्छ। र याद गर्नुहोस्, तपाइँको छालाको टोन गर्मीमा गाढा र गाढा हुन सक्छ। त्यसो भए, गर्मी महिनामा तपाईंको छाला टोनमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाई IV र V प्रकारका बीच हुनुहुन्छ भने तपाईले एउटा उपकरण छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन V V टाइप गर्न सुरक्षित छ।
यदि तपाई V र VI प्रकारका हुनुहुन्छ भने सबै टोनका लागि सुरक्षित उपकरण छान्न उत्तम हुन्छ।
अघिल्लो: आईपीएल उपकरणहरूको राम्रोसँग मान्यता प्राप्त लाभहरू
अर्को: गाढा र कालो छालाको लागि उत्तम घर आईपीएल कपाल हटाउने (भाग)